First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနယ်စပ်အနီး၊ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ရိုဟင်ဂျာနှင့်၊ ရခိုင်စစ်တကောင်း လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ထို လူမျိုးများ သည်။ ရှေးပဝေသဏီကပင် နေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြသည် ဟု အောက်ပါအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လို ရေးသား ထားသည်ကို ဘာသာ ပြန်ခြင်းဖြစ် သည်။
………… In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.These minority ethnic groups had settled in the boder region since early days.
This entry was posted on December 16, 2013, in Articles, အထောက်အထားများ, Documents, Rohingya History. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “ အီဒုလ်ဖိသွိရ်ပွဲတော်နေ့ ”	ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်များ →